Resorts Curacao Sandals® dị njikere maka ntinye akwụkwọ nwere ntụgharị $ 1000
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Curacao » Resorts Curacao Sandals® dị njikere maka ntinye akwụkwọ nwere ntụgharị $ 1000
Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Curacao • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Mgbapụta a na-amalite dị ka Sandals Royal Curaçao, na-enye nchekwa oge dị mkpirikpi ma na-ekpughere atụmatụ maka ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ mbụ.
Sandals Royal Curaçao na-anọdụ na nchekwa echekwara puku hekta atọ.
N'ebe a, ndị lụrụ di na nwunye ga -achọpụta ịma mma na ọdịdị ala nke Curaçao, nke amaara maka ọmarịcha ala ya, osimiri mara mma, ọgba nzu na nnukwu obodo Willemstad, UNESCO World Heritage Site.
Ọ dị na hekta 44 n'ime ụlọ nkeonwe Santa Barbara, nchekwa echekwara naanị 3,000-acre, Sandals Royal Curaçao ga -ejikọ ụwa ihe ịtụnanya ụwa - ọzara, oke osimiri, ugwu, na ikpere mmiri - yana ahụmịhe ebe a na -eme njem. N'ebe a, ndị lụrụ di na nwunye ga -achọpụta ịma mma na ịdị iche iche nke Curaçao, nke amaara maka ọmarịcha ala ya, oke osimiri mara mma, ọgba nzu na nnukwu obodo Willemstad, UNESCO World Heritage Site, ka na -eme ya. Okpokoro agụnyere ® Ezumike Ahụmahụ Sandals Resorts bụ ama ama.
Sandals Royal Curaçao dị maka imepe Eprel 14, 2022, nke dị naanị kilomita 15 site n'ọdụ ụgbọ elu. Ọdịmma ya dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ na-adọrọ mmasị nke otu n'ime ọdịda anyanwụ kachasị egwu na Caribbean, na-enye ndị ọbịa nlele anya. N'inwe ọnụ ụlọ 351 na okomoko nwere ọnụ ụlọ iri abụọ na anọ, Sandals Royal Curaçao ga-enwe nhọrọ okomoko nwere ike karịa nke ọ bụla na mbụ, gụnyere ụdị ụlọ ọhụrụ mbinye aka abụọ, Awa Seaside Butler Bungalows na Kurason Island Poolside Butler Bungalows, juputara na ịdị jụụ na-atọ ụtọ. Tubs ™, ọdọ mmiri nkeonwe, ọrụ ebe a na -egbu mmanya, na egwuregwu MINI Coopers nwere ike ịtụgharị na nke mara mma na -enye ekele maka ndị ọbịa ịnya ụgbọ ala mgbe ha na -enyocha agwaetiti ahụ.
Ebe Nchọpụta & Nchọgharị
Onye isi oche onye isi oche SRI, Adam Stewart, kwuru na ewezuga ebe ọhụrụ a, oke nchekwa nke nchekwa gburugburu Sandals Royal Curaçao ga -enye ohere maka njem ọhụụ nke ndị ọbịa. “Na Sandals Royal Curaçao, ndị ọbịa ga-enwekwa ike ịzọgharị, ịgba ịnyịnya na iburu nkata pịkịkị iji kwalite ụbọchị nchọta na nyocha. Ezigbo ịhụnanya. Ha nwekwara ike ịga n'ihu mmụọ a na-akpali akpali gafere ọnụ ụzọ ámá anyị ebe ha ga-ahụ ebe njedebe nke nnukwu ụlọ oriri na ọ destinationụ ,ụ, ndị obodo na-atọ ụtọ, nka na ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile. Anyị etinyela nde $ 72 ọzọ na nkwalite na ndozi iji mezue usoro '' Sandalization '' nke ụlọ a dị ịtụnanya, anyị enweghị ike ichere ka ụjọ jide ndị ọbịa anyị, "Stewart kwuru.
Sandals Royal Curaçao ga-abụ ebe ọdọ mmiri mbụ Dos Awa nke akara nwere echiche na-eleghara oke osimiri na oke ugwu siri ike, yana The Duchess, ụlọ oriri na ọ barụatingụ na-ese n'elu mmiri mbụ nke Sandals, nke e wuru site na ezigbo ụgbọ mmiri Dutch dị mita 92. Site na ụlọ oriri na ọ nineụ nineụ 5-Star Global Gourmet-(asatọ n'ime ha bụ nke ọhụrụ na nke pụrụ iche maka Sandals Royal Curaçao), ndị ọbịa ga-enweta ụtọ mba ụwa site na ite na-agbaze nke nri ụwa, gụnyere ezigbo mmanya na mmanya Dutch. Di na nwunye nwekwara ike rie nri na njem na gwongworo nri gourmet ọhụrụ atọ dị n'akụkụ osimiri na-enye ọnụ ahịa Curaçao ọdịnala, tapas Spanish, na ngwakọ Eshia, ma ọ bụ jide ihe ọ drinkụ atụ n'ụlọ mmanya ọ bụla pụrụ iche iri.
Sandals Royal Curaçao ga -aga n'ihu n'aha ika ahụ dị ka ikike ihunanya na ebe agbamakwụkwọ atọ n'oké osimiri. Ebe a na -eme njem ahụ ga -egosipụtakwa Red Lane® Spa nke nwere okomoko nwere spa cabanas isii na ụlọ ọgwụgwọ; ọdọ mmiri sara mbara; ịbanye na golf gbara agbata obi 18 nwere oghere Pete Dye; 38,000-square-feet nke oghere ime ụlọ na n'èzí, nke kachasị na agwaetiti ahụ; ụgbọ mmiri abụọ dị na saịtị na saịtị iriba 70, dabara adaba maka ndị ọbịa na-achọ isonye na ihe karịrị 100,000 ndị nwetara asambodo PADI® site na ụlọ ọrụ ezumike ugbua.
Njikere, Tọọ, Ree
Dabere na Gary Sadler, Onye isi oche onye isi ala, Mmekọrịta Global Sales & Mmepụta Mmekọrịta maka Pụrụ Iche Vacations Inc. (UVI), onye nnọchite anya onye nnọchi anya Sandals Resorts n'ụwa niile, ndị ọbịa debere ọnụnọ na Sandals Royal Curaçao ugbu a site na Nọvemba 2, 2021. nweta onyinye mmeghe pụrụ iche nke nwere nnukwu ego ruru $ 1,000. Ndị ọbịa akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ga -esokwa na nchekwa a wee nwee ike nweta uru ndị ọzọ pụrụ iche site na nhọrọ nke kredit $ 200 Island Routes Tour, $ 200 Red Lane® Spa kredit, akpụkpọ ụkwụ 5,000 ozugbo na -ahọrọ ihe nkwụghachi ụgwọ kwụ ọtọ, ma ọ bụ PADI® chọpụta ahụmịhe mmiri mmiri. maka abụọ (uru $ 200) mgbe ntinye akwụkwọ ọnụnọ nke abalị isii ma ọ bụ karịa taa site na Ọgọst 5, 2021. “Obi dị anyị ụtọ ime ka ebe a dị ịrịba ama dị maka ịde akwụkwọ yana iwebata Curaçao na ndị na -ege ntị ọhụrụ anyị maara na ọ ga -amasị ya, ịma mma nke ndị ya na ebe ọ na -aga. ume a na -apụghị ịkọwapụta. Anyị ji n'aka na ndị mmekọ anyị ga -enwe mmasị ire ụlọ nkwari akụ a, "Sadler kwuru.
Ọnụ ego mmeghe na Sandals Royal Curaçao na-amalite na $ 341 kwa mmadụ, kwa abalị, na ọnụego otu onye na-egbu mmanya na-amalite na $ 538 kwa mmadụ, kwa abalị, dabere na mmadụ abụọ bi na ya na abalị asaa. Maka ozi ndị ọzọ, gaa na www.sandals.com. Iji mụtakwuo gbasara ihe ị ga -atụ anya mgbe ịnọ na Sandals Royal Curaçao, gụọ blog a ebe a: https://www.sandals.com/blog/curacao-sandals-latest-destination/.
Resorts Sandals na -enye mmadụ abụọ ịhụnanya kachasị, ahụmịhe ezumike Luxury Include® na Caribbean. Site na ntọala 16 dị egwu n'akụkụ osimiri na Jamaica, Antigua, Saint Lucia, The Bahamas, Barbados, Grenada, na Curaçao mepere Eprel 14, 2022, Sandals Resorts na -enye ntinye dị mma karịa ụlọ ọrụ ezumike ọ bụla ọzọ na mbara ala. Akara Mbinye aka Ịhụnanya Nest Butler Suites® maka njedebe nzuzo na ọrụ kacha; butlers zụrụ site na Guild of Professional English Butlers; Red Lane Spa®; 5-Star Global Gourmet ™ iri nri, ịhụ na mmanya dị n'elu, mmanya kacha mma, na ụlọ oriri na ọtyụurụ pụrụ iche; Ụlọ ọrụ Aqua nwere asambodo na ọzụzụ PADI® ọkachamara; Wi-Fi ngwa ngwa site n'ụsọ osimiri ruo na ime ụlọ na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ a na-edozighị emezi bụ naanị ebe ntụrụndụ akpụkpọ ụkwụ. Resorts Sandals na -ekwe ndị ọbịa udo nke obi site na mbata ruo ọpụpụ Protocols Sandal nke Platinum nke linessdị Ọcha, usoro ahụike na nchekwa nke ụlọ ọrụ ahụ kwalitere iji nye ndị ọbịa nnukwu obi ike mgbe ezumike na Caribbean. Ebe a na-akpọ Sandal Resorts bụ akụkụ nke ezinụlọ nwere Sandals Resorts International (SRI), nke mbubreyo Gordon “Butch” Stewart guzobere, nke gụnyere Resorts Resorts na ọ bụ ụlọ ọrụ Caribbean na-eduga ụlọ ọrụ ezumike niile. Maka ozi ndị ọzọ gbasara Sandals Resorts Luxury Included® iche, gaa na www.sandals.com.
Ụkpụrụ njem ọhụrụ: Mmefu njem na -arị elu na ...
Obodo dị ka azụmahịa na -aga ụzọ ...
Ememe ihe nkiri ihe nkiri njem nlegharị anya ụwa niile bidoro n'October 21
Enweghị egwu Tsunami maka Hawaii, Guam, Saipan
Amachibidoro mmachi na Bangkok ka ọnụọgụ COVID dara 30%
Air Canada dị njikere ijikọ Canada na US na Up ...
Ala ọma jijiji nwụrụ na Haiti karịrị 1400
Airbnb: obodo iri na otu kacha mma na Latin America maka US ...